Semalt dia manome soso-kevitra 5 amin'ny Image Extraction Tool
Ny fitaovana fanesorana sary dia manampy amin'ny fanaovana lisitra sary hita ao amin'ny tranonkala voatondro. Azonao ampiasaina ity fitaovana ity mba hisintonana sary ary hampidirina any amin'ny format JSON. Ity fitaovana ity dia manana interface mora sy mora ampiasaina. Tsy maintsy ampidirina ao amin'ny URL misy tranonkala iray tianao hampihetsi-po anao sy handefa ny bokotra "Submit". Ny fitaovana fanangonana sary avy hatrany dia mamerina ny votoaty ary maniry ny vokatra tianao. Ny sasany amin'ireo dikan-teniny farany dia voalaza etsy ambany - anti redness cream avene cleanance.
ExtractPDF dia manampy amin'ny fanoratana tahirin-kevitra PDF ary mamaky azy ireo amin'ny fizarana tsirairay: sary, soratra, fonos ary metadata. Azonao atao ny manaparitaka tranokala maro araka izay tadiavinao nefa tsy mampandefitra ny kalitaony. Tsy maintsy ampidirina fotsiny ny URL ary avelao ny ExtractPDF hanaparitaka ny angona
Konwerter dia mpaka sary lehibe hafa izay manala ny sary sy ny rakitra amam-bintana miaraka aminy. Mahasoa ho an'ny orinasa sy ny orinasa ity fitaovana ity. Azonao atao ny mampiasa ny fitaovana BMP, GIF, JPG ary PNG. Tsy maintsy asongadinao fotsiny ny angon-drakitra ary tsindrio ny bokotra "Extract" mba hanombohana ny fanasarahana. Rehefa vita amin'ny alàlan'ny fanoratana ny Konwerter dia azonao atao ny maka ny angona ao anaty format malalaka.
SmallPDF dia dika iray hafa amin'ny fitaovana fanesorana sary. Izy io dia manana interface mora sy afaka manasaka sary maro araka izay irinao. SmallPDF dia tsy vitan'ny hoe mametaka rakitra JPG sy PNG fa mamoaka ny angona avy amin'ny rakitra PDF. Azonao atao ny mahazo ny angona ao anaty format malalaka sy azo havaozina ary afaka miteraka fitarihana bebe kokoa amin'ny aterineto. Rehefa mampiditra ny URL ianao na mamoaka sary, dia mila mametaka fotsiny ny bokotra "Scrape" ianao ary avelao ity fitaovana ity hanatanteraka ny asany.
PDF Online dia iray amin'ireo dikan-teny tsara indrindra amin'ny fitaovana famoronana sary. Mahazo sary tsara tarehy ianao ary mamerina pejy marobe amin'ny tranokala maivana. Ny disadisa ihany no ahafahan'ny fitaovana maimaim-poana amin'ny sary telo amin'ny fotoana iray. Midika izany fa tsy azonao ampiasaina amin'ny tetikasa goavana izany ary tsy maintsy mividy ny dikan-dika voalohany. Ny PDF Online dia tsy mila entina an-telefaona ary afaka manatanteraka ny drafitr'asa momba ny asa an-tserasera. Izany dia fandaharanasa feno sy azo antoka, mety ho an'ny orinasa, programmers, code, expert IT sy webmasters.
PDFMate dia fitaovana iray hafa mahavariana amin'ny fitaovana fanangonana sary. Azo ampiasaina ho an'ny mpampiasa Windows izy io ary fantatra amin'ny ankapobeny ny interface. Miaraka amin'ny PDFMate, azonao atao ny mikorisa sary na sary PDF araka izay tianao. Ity fitaovana ity dia mamerina mamoaka ny angon-drakitra avy amin'ny pejy mavo, fotsy fotsy, fifanakalozan-kevitra momba ny fifanakalozan-kevitra ary ny finday anaty aterineto. Izy io dia mamerina ireo rakitra PNG sy JPG ary dia rindrambaiko azo antoka.
Ho an'ny fanavaozana fikarohana mety, ny sary rehetra dia tokony hanana toetra ALT. Ireo toetra dia mampahafantatra an'i Google ny sarinao ary manome hevitra azy ny karazana votoaty anananao. Ny dikan-teny etsy ambony misy fitaovana fanodinana sary dia azo antoka sy marina. Manome valiny vitsivitsy izy ireo ary tsy mila code. Azonao atao ny mandray soa avy amin'ireo rindrambaiko ho an'ny rindrankajy ho toy ny programa tsy fandaharana.